कम्प्युटर - यो इलेक्ट्रोनिक कम्प्युटर, एक सुसंगत सिस्टम गठन।
यस लेखमा के एक कम्प्युटर बारे छ, र, यो मुद्दा बताइरहेका, यो असम्भव कुरा र यी मिसिन को इतिहास हाम्रो जीवन सुधार बारे गर्न छैन।
पहिले नै ज्ञात, व्यक्ति सधैं आफ्नो जीवन सरल बनाउन खोज्ने, र यसैले, विद्युतीय कम्प्युटर सिर्जना तपाईं चाँडै आवश्यक कार्यहरू गर्न अनुमति दिन्छ। पहिलो कम्प्युटर, वा जस्तै, भनिन्छ abacus - एक साधारण गणना बोर्ड। यसलाई सरल गणना अनुमति दिन्छ, र एकदम सरल प्रबन्ध मिलाए।
पहिलो योजना कम्प्युटर उपकरणहरू को मिसिन को विकास र 1946 मा Dzhon फन Neyman नाम चिरपरिचित वैज्ञानिक-गणितज्ञ प्रस्ताव गरिएको छ। प्रविधि को प्रगतिशील विकास, थप र थप नयाँ परियोजनाहरूको उद्भव बाबजुद, पहिलो कम्प्युटर को सिद्धान्तहरू धेरै प्रयोग र आधुनिक उपकरण।
वन NEUMANN एक्लै काम गरेन, तर सहकर्मी संग। आफ्नो मद्दत संग, यो संयन्त्र भविष्य संरचना निर्धारण गर्नेछ। उहाँलाई अनुसार, त्यो जो बिना पनि, दिइँदैन गर्न सकिँदैन, बाह्य संग, एक भन्दा बढी उपकरण छ थियो। यो तार्किक र गणित संचालन वा कार्य जो एक उपकरण छ ALU (गणित तर्क एकाइ) नियन्त्रण, वा uu। यो पनि आवश्यक थियो र स्टोर कार्यक्रम र डाटा केही स्मृति। बाह्य उपकरणहरू विभिन्न जानकारी को समारोह इनपुट र आउटपुट प्रदर्शन।
Dzhon फन Neyman स्मृति यसको सबै कक्षहरू एक बराबर footing अन्य गणनाको उपकरणहरूको लागि उपलब्ध हुनेछ भन्ने यस्तो तरिकाले व्यवस्थित हुनुपर्छ भनेर सुझाव।
गणित को संरचना वाहेक र, पहिलो कम्प्युटर को आधारभूत सिद्धान्तहरू पहिचान निम्नानुसार थियो। आदेश सफ्टवेयर नियन्त्रण सिद्धान्त भनिन्छ के अनुक्रम मा एक प्रोसेसर, द्वारा प्रदर्शन हुनुपर्छ। सबै कार्यक्रम, डाटा संग जो, बारी मा, कक्षहरू बनेको छ एक स्मृति भण्डार गर्न। तिनीहरूलाई प्रत्येक यसको आफ्नै नम्बर छ, र प्रोसेसर कुनै पनि समयमा उपलब्ध छ।
यी सिद्धान्तहरू पालन गर्दै छन्, र "पृष्ठभूमि neymanskimi" को रूपमा उल्लेख गर्दै केही आधुनिक कम्प्युटर, मा। त्यसैले, NEUMANN को XX सताब्दी को बीचमा, यो कस्तो कम्प्युटर छ को एक परिभाषा दिए भने गर्न सकिन्छ।
आजको पीसी को समस्या एक उच्च गति डाटा अधिग्रहण, प्रशोधन, दिइरहनुभएको र प्राप्त डाटा प्रदान गर्न छ। यो कर्मचारीहरु र उत्पादन एकाइहरु व्यवस्थापनका लागि सुविधाजनक हुनुपर्छ। हाम्रो समय मा, प्रविधिको उच्च गतिको विकास, प्रविधि नयाँ प्रकार को उद्भव को एक अवधि मा, पीसी यदि सबै छैन, त्यसपछि हरेक दोस्रो व्यक्ति हो। सामान्यतया यो जोडिएको छ व्यक्तिगत कम्प्युटर छ , जानकारी नेटवर्क यसरी हाम्रो जीवन को एक धेरै महत्त्वपूर्ण भाग बन्ने।
कम्प्युटर अब - मुख्य जानकारी उपकरण र कार्यालय र घर मा। लगभग सबै काम यो पाठ सन्देश सामान्य एरे वा एक मनोरंजक फिलिम हेर्न चाहे, यो संग जानकारी बाहिर छ।
आजको सबैभन्दा उन्नत कम्प्यूटर स्पष्ट निर्माण भन्ने छैन कृत्रिम बुद्धि भनिन्छ जो कार्यहरू एक अल्गोरिदम, समस्या सुलझाने मा जटिल जैविक र शारीरिक प्रक्रिया मोडेलिंग मा प्रयोग गरिन्छ। यो क्षेत्र मा, कम्प्युटर सिर्फ आफ्नो विकास, यो भन्न असम्भव छ, जबकि कम्प्युटर, यस्तो समस्या सुलझाने छ भनेर थालेका छन्।
आधुनिक कम्प्युटर कम्प्युटर को चौथो पुस्ता अनुपम छन्, तर केही तिनीहरू पाँचौ छ reckon। र उचित त्यसैले, सफ्टवेयर को तीव्र विकास दिइएको। त्यसैले, यो प्रश्न कुनै एकल, सटीक जवाफ छ।
त्यसैले, कम्प्युटर - यो आज जो कोहीले आधुनिक जीवनमा के गर्न सक्दैन जो बिना कुरा हो। यस्तो कम्प्युटर र कसरी कथा विकास गर्न, पर्याप्त भन्दा बढी लिखित भन्ने तथ्यलाई।
ब्रान्ड «Benq» बाट सिद्ध समाधान। मनिटर र GW2250M V2220H - मूल्य र गुणस्तर को एक उत्कृष्ट संयोजन
Inkjet मुद्रक Canon IP1800: लक्षण, वर्णन, फोटो र समीक्षा
ट्याब्लेट लागि बाह्य3जी मोडेम
भान्सा बालकनी ढोका लागि शीर्ष पर्दे
Keck - यो के हो? बताए कठबोली
बीउ बिरुवाहरु को भ्रूण के हो? बीउ भ्रूण को संरचना
Katya Korol: सहभागीको वास्तविकता शो "डोम-2" को एक जीवनी